Ny governemanta dia mifikitra amin'ny indostrian'ny hotely, fizahan-tany ary fizahan-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ny governemanta dia mifikitra amin'ny indostrian'ny hotely, fizahan-tany ary fizahan-tany
Editorial • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Safety • Tourism • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
fitsangatsanganana hotely sy fizahan-tany
Ny indostrian'ny hotely, fizahan-tany ary fizahan-tany dia notombohin'ny Covid-19. Amin'ny maha mpiara-miasa stratejika amin'ny paradigma fizahantany, ny mpitantana hotely dia nahita fihenan-tsolika amin'ity sehatra ity tamin'ny 59 isan-jato tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2020. Ny fikarohana nataon'i McKinsey dia nanolo-kevitra fa ny sehatra indostrialy rehetra dia tsy hahita fanarenana ny haavon'ny COVID-19 hatramin'ny 2023 na tatỳ aoriana.
Tamin'ny taona 2019, ny fizahan-tany dia nanisa sahabo ho 10 isan-jaton'ny harin-karena faobe efa ho $ 9 tapitrisa. Antenaina fa ny fahatongavan'ireo mpizahatany iraisam-pirenena dia hiaina fihenan'ny 60-80 isan-jato amin'ny taona 2020 ary ny fandaniana ny fizahan-tany dia mety tsy hiverina amin'ny ambaratonga mialoha ny krizy hatramin'ny 2024 (mckinsey.com).
Vaky ny indostria, ny famerenana indray ireo orinasa mifandraika amin'ny fizahan-tany sy ny famolavolana modely maharitra azo antoka, mifanaraka amin'ny andrasan'ny mpizahatany ary azo tanterahina ara-toekarena dia mitaky fitarihana amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina, fiaraha-miasa ary fandrindrana izay mbola tsy nisy toa azy.
Crazy Quilt amin'ny fitsipika vaovao
Sahirana ny mpanjifa sy ny mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria noho ny fameperana tsy voafetra napetraky ny olom-boafidy amin'ity sehatry ny toekarena ity. Raha toa ka vonona ny hanome ny WHO (Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana) sy ny mpitondra fanjakana ny tombotsoan'ny fisalasalana amin'ny fiantombohan'ny virus coronavirus, mamela azy ireo hanana fotoana hitadiavana ny tenany sy ny politikany milamina. Saingy, 6 volana mahery izao dia lasa ny areti-mandringana sy ny fanapaha-kevitra tsy aritra sy tsy misy dikany mamaritra ny hetsika, hetsika ary orinasa avela hisokatra na tsy avela hisokatra dia niteraka korontana tamin'ireo sehatra nahomby sy nahazo tombony teo amin'ny toekarena manerantany.
Any Michigan dia avela handeha sambo, fa mety ho voasambotra ianao raha mampiasa motera. Any California, ok ny fivarotana rongony, fa ny manaratra-bolo dia tsia. Ny faran'ny herinandro iray any Miami dia misokatra ny morontsiraka, ny manaraka dia mihidy izy ireo. Ny bara any New York dia sokafana amin'ny faran'ny herinandro iray, ary hakatona avy eo. Ny ivon-toeram-pitsaboana ara-batana any New York dia namerina ny fanazaran-dry zareo, saingy nikatona foana ireo gym. Misokatra ny dobo filomanosana ho an'ny daholobe, fa ny pisinina manokana kosa tsy afaka misokatra. Mihidy ny torapasika Hawaii, fa misokatra kosa ny dobo fandroana. Tany New York (hatramin'ny volana Jona 2020), nisokatra ny filokana Amerikanina tera-tany andrefan'ny New York sy afovoany New York fa nakatona ny hazakazaka amina hazakazaka misy loteria misy horonantsary sy trano filokana efatra any avaratra. Mbola nikatona ny sinema ary raha ny kianja filalaovana sy ny kamory dia miankina amin'ny tanàna raha misokatra izy ireo na mijanona mihidy. Ireo firenena dia voalaza fa ao anaty krizy ara-pahasalamana nefa mbola noroahina ireo mpitsabo mpanampy, manidy ny asany ny mpitsabo ary manana trosa be ny hopitaly ka mety tsy hijanonany intsony ny serivisy omeny.
The Mad Hatter amin'ny maha-mpitarika
Toa an'i Alice in Wonderland, ny mpitantana orinasa dia tsy afaka mamaritra ny lalàna satria miova haingana izy ireo ary tsy misy famerenana, fiheverana, fifampiresahana na fanamarinana. Amin'izao fotoana izao, ny baiko mpanatanteraka dia nanolo ny fizotry ny antony fanaovana / fanafoanana ny lalàna sy ny lalàna; ny marina dia izay lazain'ny mpanjaka (filoha, governora, ben'ny tanàna). Ny fanjakan'ny lalàna nifehy an'i Etazonia (sy ny firenena maro hafa) dia nanjavona satria ny ala any California sy Oregon dia ripaky ny afo sy ny lelafo, satria ny mpitarika sasany dia tsy mino ny fiakaran'ny tany.
Ny lalàna COVID-19 ankehitriny dia toa noforonina avy amin'ny loharanom-pahalalana sary an-tsaina sy tsy misy antontan-taratasy feno antontan'isa izay tsy misy ifandraisany amin'ny zava-misy. Ny Fitsipika Vaovao dia tsy mila lojika, mitombina, na azo atao mihitsy aza. Satria tsy mbola nisy ny fizotran-dalàna nampiasaina tamin'ny fanaovana lalàna, dia tsy misy toerana hanaovana famerenana na fifanakalozan-kevitra ary azo antoka fa tsy teboka iray ho an'ny tsy fifanarahana.
Nanoratra i Ayn Rand hoe: “Ny hany fahefana ananan'ny governemanta dia ny fahefana hamono ireo mpanao heloka bevava. Rehefa tsy ampy ny mpanao heloka bevava, dia misy manamboatra azy ireo. Ny iray dia manambara fa heloka bevava ny olona ka tsy afaka miaina ny lehilahy raha tsy mandika lalàna. ”
Ny olona ao amin'ny governemanta dia nanala ireo fefy nitana ny heriny ary nanambara fa saika tsy ara-dalàna ny zava-drehetra manoloana ny fandrahonana ara-pahasalamana (mifototra amin'ny tena izy na an-tsaina - tsy amin'ny siansa, fa amin'ny hevitra politika). Miala ao an-trano mandritra ny quarantine? Fanitsakitsahana ny sazy. Trano fisakafoanana misy toeram-pisakafoanana ivelany fa misy latabatra latsaky ny 6 metatra ny elanelana misy azy? Fanitsakitsahana. Manapaka volo sa manome manicure? Fanitsakitsahana.
Ny fitondram-panjakana. Fanohanana na fanelingelenana
Amin'ny tranga maro, voafetra ny andraikitry ny governemanta amin'ny famerana, marketing, ary fitantanana hotely, fivezivezena ary fizahan-tany fizahan-tany. Na izany aza, nanjary miharihary fa ny governemanta dia nilalao ary nanohy nirotsaka an-tsehatra mivantana tamin'ny fahombiazana / tsy fahombiazan'ny sehatry ny hotely, fizahan-tany ary fizahan-tany. Ny mpitondra fanjakana sy ny mpiara-miasa aminy dia mamaritra ny fisokafana sy ny fanidiana ny sisin-tany, ny fepetra hidirana amin'ny firenena, ny fanokafana sy ny fanidiana ny sehatra eo amin'ny fiaraha-monina ary koa ny hetsika fiarovana, fiarovana ary kolontsaina hafa. Ireo fanapahan-kevitra ireo dia misy fiatraikany mivantana amin'ny fahafahan'ny hotely, fizahantany ary fizahan-tany fizahan-tany hiasa. Ny vokatry ny hetsiky ny governemanta dia misy fiatraikany amin'ireo mpiara-miombon'antoka mpiara-dia aminy (fa tsy voafetra ho) trano fisakafoanana, trano fisotroana, ivon-toeram-pialamboly, kianja filalaovana, efitrano fanaovana rindran-kira, dobo filomanosana, toeram-pivarotana antsinjarany, sy sinema.
Ankehitriny rehefa hitantsika ny dian-tongotra lehibe ananan'ny governemanta amin'ny sehatry ny toekarena mifandraika amin'ny fizahan-tany, mety ho fotoana mety ho an'ny mpitondra ny hijerena ny andraikitr'izy ireo amin'ny fandrindrana ireo indostria fa tsy hiantehitra amin'ny tsora-kazo sy fandrahonana sazy sy fanakatonana, dia tokony hiara-miasa izy ireo miaraka amin'ireo mpitarika ny orinasa mba hanampy amin'ny ezaka fanarenana sy manampy azy hitombo.
Marina fa ny ati-dohan'olombelona dia voalamina ho amin'ny fanantenana, matetika dia manadino ny mety hisian'ny vokatra tsara amin'ny hetsika ho avy ary manambany ny mety ho an'ny ratsy. Ity fitongilanana ity dia tsy azo resahana amin'ny tsirairay, fa kosa amin'ny ambaratonga fandaminana izay misy vondrona sy sampan-draharaha andrim-panjakana natao hampihena ny vokatry ny fitongilanana. Izany dia mitaky ny famolavolana ny faharetana ho amin'ny fitantanana (izany hoe ireo singa mifantoka amin'ny siansa, ny fanafody, ny loza) ary misy ny asa rehetra, ny fizotrany, ny teknika, ny fahaiza-mitarika, ny fahaiza-manao ary ny enti-manana.
Tany Etazonia, ny faharetana dia ampahany tamin'ny fitantanan'i Obama sy ireo masoivohon'ny governemanta eo an-toerana, tanàna ary fanjakana ary nahafahana namaly haingana ny Ebola sy ny SARS ary ny mety ho fiparitahan-dravina hafa. Na izany aza, ny maodelin'ny birao miasa ankehitriny any Washington, DC (ary mivoaka manerana ny governemanta any amin'ny fari-piadidian'ny tanàna, ny tanàna ary ny fanjakana) dia nopotehina / voafafa na voafafa. Ireo firafitra siantifika nanjavona izay noana tamin'ny loharanom-pahalalana dia nosoloin'ireo olon-tsotra nipetraka tao tsy misy taratasy sy mari-pahaizana ilaina mba hamantarana, hahazoana ary hametrahana valiny mifanaraka amin'ny krizy. Ny fitantanana risika dia raisina ho tsy ilaina, soloina fisainana majika.
Ny fomba fitantanana goavam-be amin'ny COVID-19 sy ny trano fandraisam-bahiny, fitsangatsanganana ary fizahan-tany dia niteraka fahasarotana tsy mbola nisy toa azy. Fantatry ny mpitarika indostria fa ilaina ny mpanao politika hanao varotra eo amin'ny soatoavina mifaninana. Aiza ny fifandanjana eo amin'ny tombontsoan'ny mpanohitra? Tsy maintsy jerena ny olana ara-pahasalamana sy fiarovana miaraka amin'ny fampandrosoana toekarena; fahalalahana isam-batan'olona vs tombontsoa iraisana; mangarahara vs fiainana manokana; zo vs adidy; fahombiazana vs fitoviana; fanehoan-kevitra malalaka vs. tsaho, ary fampahalalana diso. Mandritra ny fotoam-pahafinaretana, ary indrindra indrindra amin'ny fotoan-tsarotra, izay mitombo ny tsy fahatokisana, ny mety ho fatiantoka lehibe (ary ny tombony be), ampiarahina amin'ny tebiteby sy ny fahaverezan'ny fahatokisana ny governemanta sy ny etika fitantanana mampiahiahy, ahoana no hataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny fifandanjana?
Iray amin'ireo lahasa voalohany ny miatrika ny zava-misy. Ny fizahantany dia miteraka fifanakalozam-bola ivelany, mitondra ny fampandrosoana isam-paritra, manohana mivantana asa sy orinasa marobe ary manohana ny toekarena ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana. Ity sehatra ity dia mandray anjara mivantana, amin'ny salanisa, 4.4 isan-jaton'ny harin-karena faobe sy 21.5 isan-jaton'ny fanondranana asa fanompoana ao amin'ny OEDC (Organisation for Economic Co-Operation and Development, solontenan'ny firenena eropeana 37). Ny fizahan-tany any Espana dia mandray anjara 11.8 isan-jaton'ny harin-karena faobe kosa ny 52.3 isanjaton'ny fanondranana serivisy. Any Mexico, 8.7 isan-jaton'ny harin-karena faobe dia avy amin'ny fizahan-tany ary 78.3 isan-jato amin'ny fanondranana serivisy fitsangatsanganana; any Frantsa, ny 7.4 isan-jaton'ny harin-karena faobe dia avy amin'ny fizahan-tany ary 22.2 isan-jato amin'ny fanondranana serivisy fitetezam-paritany.
Amin'ny tranga maro, ny governemanta dia nanaiky ny tombotsoan'ny hotely, ny dia, ny fizahan-tany ary ny indostria mifandraika amin'izany. Ny serivisy fanampiana dia misy ny protokolan'ny fahasalamana sy ny fampahalalana momba ny fomba hiatrehana ireo torolàlana ireo; fotoana mety hiatrehana ny vola azo avy amin'ny fanemorana ny fandoavam-bola; fepetra hamatsiana trosan-trosa fanampiny sy misy; ary ireo dingana hialana amin'ny vokadratsin'ny famoahana tsy voarindra.
Manerantany, ny governemanta dia nanokatra ny faucet vola tamin'ny fifantohana amin'ny hitazomana ny indostria. Ireo komity iraisana, ao anatin'izany ny solontenan'ny sehatra tsy miankina ankoatr'ireo olom-boafidy sy mpitantana ao amin'ny governemanta dia mivory mba hamahana ireo fahasarotana mitohy sy mivoatra mifandraika amin'ny COVID-19 sy ireo indostrian'ny dia, fizahan-tany ary fizahan-tany mifandraika amin'izany. Na izany aza, ny zavatra tsy voaresaka, ao amin'ny rafitra mpanamory fiaramanidina, tsy mifanaraka, matetika tsy misy fotony no rafitra sy fomba fiasa ilaina amin'ny famonoana ary amin'ny farany fanafoanana io aretina io miaraka amin'ny zava-misy fa tena misy ny " aretina manaraka. ” Manaiky ny mpahay siansa sy ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana amin'ny besinimaro fa hisy ny krizy ara-pahasalamana mitohy manoloana ny toekarena manerantany mifamatotra sy mifamatotra ary ireo vonjy taitra ireo dia hisy fiantraikany mivantana amin'ny fahafaha-manao sy fahafahan'ny olona mivezivezy malalaka avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa, eto an-toerana sy any ivelany.
Betsaka ny vola apetraka amin'ny sehatry ny hôtely, fitsangatsanganana ary fizahan-tany raha maro hafa kosa no tsy raharahiana. Teny maro no atakalo; na izany aza, hita fa be ny ado - saingy kely ny mijery fomba feno momba ny zava-misy ankehitriny sy miresaka ny ho avy.
Amin'ny tontolo tsara indrindra amin'ny mety rehetra, ny solontenan'ny governemanta izay miara-miasa amin'ireo mpitarika ny sehatra tsy miankina dia hiasa hamorona làlana izay hitarika hotely miorina, milamina sy maharitra, fitsangantsanganana, fizahan-tany ary fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miasa. Mampalahelo fa ny fikarohana nataoko dia tsy nahitana fikambanana, orinasa na olona manana fomba fijery makro-toekarena sy maharitra miaraka amin'ny fahalianana sy / na fahaiza-manao hamolavola, hitarika ary hampihatra ireo hetsika sy hetsika ilaina hahatratrarana ireo tanjona ireo.